भद्रपुरकी गायिका मेलिना भन्छिन्ः भाग्य र मिहिनेतमा विश्वास छ खबरमञ्च
2020/09/30, at 9:55 PM
By खबर मञ्च / September 30, 2020 / Comments Off on भद्रपुरकी गायिका मेलिना भन्छिन्ः भाग्य र मिहिनेतमा विश्वास छ
काठमाण्डौले भाइरल खोज्छ
२ महिना अगाडि काठमाण्डौ आएकी मेलिना दशैंमा फेरि भद्रपुर नै फर्किनेछिन् । उनलाई काठमाण्डौ शहरमा गायनमा सफल हुनका लागि सजिलो छैन भन्ने लागेको छ । मेलिना भन्छिन्–‘मैले जसलाई भेट्छु, सबैले मेरो स्वरको निकै प्रशंसा गर्नुहुन्छ । तर, धेरैले यहाँ भाइरल गायक–गायिका खोज्नुहुनेरहेछ । कसैले अवसर नै नदिई कसरी हाम्रो स्वर दर्शकसम्म पुग्छ र कामको मुल्यांकन हुन्छ ?’
मेलिनाले २ महिनादेखि काठमाण्डौमा निकै दौडधुप गरिरहेकी छिन् । देशका चलेका संगीतकारदेखि नाम चलेका म्यूजिक भिडियो निर्देशकलाई भेटेकी छिन् । धेरैले दिने एउटै जवाफ छ, पहिले भाइरल हुनु अनी काम गरौंला । यसले उनको मन दुखाएको छ । मेलिनाले भनिन्–‘युटुबमा भ्यूज, टिकटकमा फ्यान हेरेर मात्र अवसर पाइनेरहेछ । एउटा गायिकाको स्वर बलियो हुनुपर्छ । तर, यहाँ स्वरसँगै सुन्दरता पनि हेरिन्छ ।’
बजारमा राम्रो गीत युटुबमा सर्च गरेर खोज्नुपर्ने तर उट्पट्याङ गीतहरुको चर्चा भएको उनले पनि वुझेकी छिन् । मेलिना भन्छिन्–‘मलाई लामो रेशको घोडा बन्नुछ । यस्तो कुराले आत्तिन हुँदैन । दर्शक श्रोताले मन पराएपछि लामो समयसम्म चल्न सकिन्छ । भारइल त केही दिनका लागि मात्र हो ।’
मेलिना आफैले गीत रेकर्ड गराएर, भिडियो आफै बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था आफ्नो नभएको बताउँछिन् । भनिन्–‘आर्थिक अवस्था बलियो भए त म काठमाण्डौ आएर बसिहाल्थे नी । मलाई आफूमाथि विश्वास छ । कुनै राम्रो सर्जकले ममाथि विश्वास गर्नुभयो भने म उहाँलाई आफ्नो स्वरबाट निराश बनाउदिनँ ।’
यसरी जन्मियो ‘छोटो छ जिन्दगी’
मेलिनाले केही गीत रेकर्ड गराएकी छिन् । उनले गाएको मध्ये ‘छोटो छ जिन्दगी’ बोलको गीतले दर्शकको मन जित्यो । मेलिना घरमा रहँदा गीत गाइरहन्थिन् ।
उनका दाजुले गायक भूपू पाण्डेलाई उनको स्वर सामाजिक सञ्जालबाट पठाइदिएका थिए । भूपूले मेलिनाको स्वर रुचाएपछि उनलाई काठमाण्डौ बोलाए र गीत रेकर्ड गराए । यो गीतले चर्चा पाएपछि मेलिनाको पनि स्वरको चर्चा हुन थाल्यो । यसपछि उनले ‘साह्रै याद आउँछ, मुग्लान’ लगायतका गीत गाइसकेकी छिन् ।
भाग्य र मिहिनेतमा विश्वास छ
सांगीतिक क्षेत्रमा अहिले प्रतिस्पर्धा बढेको छ । विभिन्न रियालिटी शो, कभर गीत, टिकटक लगायतका माध्यमबाट गायक–गायिकाको आवागमन बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नु सहज छैन ।
मेलिना भन्छिन्–‘मलाई भाग्य र आफ्नो मिहिनेतमा विश्वास छ । यसैले, मलाई अहिले नै हतार छैन । लामो समयसम्म चल्न गीत गाउन मन छ । आज हिट भोलि फ्लप भएर करिअर लामो समयसम्म चल्दैन । कुनै दिन आफूले गाएको गीत हेर्दा पछुतो नहोस्, म यत्ती चाहन्छु ।’
मेलिनाको अबको सपना भनेको दर्शकलाई मिठा गीत पस्कने हो । यसका लागि उनी मिहिनेत गरिरहेकी छिन् । अझै पनि आफूले धेरै सिक्न बाँकी छ भन्ने मेलिना अहिले नै काठमाण्डौमा आएर बस्ने सोचमा भने छैनन् । दशैंमा पूर्व नै फर्किन लागेकी मेलिना काठमाण्डौले फेरि बोलायो भने आइरहन्छु भन्छिन् ।
१७ बर्षको उमेरमै उनीसँग आत्मविश्वास भने बलियो छ । यही आत्मविश्वासले उनलाई अरु गायक–गायिका भन्दा अलग परिचय यो क्षेत्रले दिन्छ भन्ने लागेको छ । बजारमा भाइरल गीत चल्छन् । भाइरल गायक–गायिकाको खोजी बढी हुन्छ । के यो भीडमा मेलिनाले छुट्टै स्थान बनाउन सक्लिन् त ?
Published:3weeks ago on September 30, 2020
Last Modified: October 1, 2020 @ 7:43 am
हाँस्यकलाकार हरिवंश आचार्य र उनकी पत्नी रमिलालाई कोरोना संक्रमण
अन्ततः क्लिनफिड लागू, विदेशी च्यानलमा विज्ञापन बजाउन नपाइने
आज वडादसैंको आठौं दिनः महाअष्टमी पर्व मनाइँदै, शक्तिपीठहरु भने सुनसान
डा. बाबुराम भट्टराई र उनकी पत्नी हिसिला यमीलाई कोरोना संक्रमण
दसैंमा कचनकवल गाउँपालिका जानेलाई पीसीआर रिपाेर्ट अनिवार्य
वर्षा राउतकाे प्रश्नः कसले सुन्ने हाम्राे चित्कार, कसले मेटाउने त्रास ?